Taariikhda My Butros » Sidee Si Noqo Dating Safe
Last updated: Jan. 26 2021 | 4 min akhri
Si kastaba ha ahaatee aad jeceshahay inaad u samayso, shukaansigu waa ciyaar halis ah. Ma aha in aad la hadasho shisheeyayaal waxaa laga yaabaa talooyin wanaagsan in la siiyo carruurta, laakiin isagoo u Xeelaysanayn in ay joojiso hal, waxa uu leeyahay ugu yaraan hal aragno khasaare cad. Haddii aan aad rabto inaad guursato inaadeerkaa, helo qof in aan dago leh ku lug yeelan doontaa samaynta xiriirka indhaha la wadarta shisheeyayaal, mashquuliyo sheekooyin iyo iyaga kulan fool-ka-fool ah.
Waxaa jira laba khataraha cad halkaan. Ta hore waxa weeye in aad saaxiib cusub ayaa laga yaabaa in ay noqon falanfallow dhamaystiran laakiin run ahaantii noqon kartaa philanderer qabow dilaa ah oo leh rikoor ah oo wadnaha-breaking. Waxay ku fikiri waxba idin hoggaamiya oo ku saabsan, ciyaaro iyo tumanaya badan shucuurtaada. Taasi xun ku filan oo aad shay laga yaabo in ku filan oo dad ah sida in mar hore.
Khatar labaad waa sii xun, xitaa haddii ay tahay yara naadir ah oo heshiis weyn. Oo shisheeyihii u soo jiidasho leh in aad la kulanto in bar dhab ahaan waxay noqon kartaa dembiile ah ka soo baxsaday sanatorium degaanka. Halkii ay ka heli qof, oo aad ka amaan iyo inta ka hartay noloshaada, aad qaado qof ilaa cidda ilmaha in aad nabadgelyada khatar iyo aad u baahan tahay in aad qaadatid taxane ah oo amar maxkamadeed iyo nidaamka shanqadha cusub.
Inkastoo fursadaha shirka qof sida online tani ay tahay mid aad u yar, waxaa haboon samaynta dadaalka in ay ka taxadaraan. Cutubkan, waxaan u socoto in ay ka hadlaan sida ay u wadid oo nadiif ah kooxda labaad iyo amaan online.
Qarsoodi jarid labada dhinacba
Marka aad la kulanto qof ee baar, bilowga ah qaadi doono waa sida badan jeeg ammaanka ah sida ay baaritaan-baxay. Haddii aad aragto qof soo jiidasho leh oo keliya ee fadhiya miiska soo socda in idinkaa iska leh, ka hor inta aadan xataa u eegto ka hor inta aanad nooc kasta oo gebi ahaanba waxaad dhawri muddo dhowr miridh ah si aad u aragto sida ay u dhaqmayaan la mudalabyada, ahaantood ama dad gudbin by. Haddii ay u edeb, iskibriya ama kaliya darana aan fiicnayn, waxba ma ahan inta looker ah ay yihiin, aad weli u soo eego xaq on by. Haddii keliyahoo aad aad tahay hubiyo in ay tahay mid caadi ah, dadbaa ilbaxnimada ha isku daydo inaad xiriirka indhaha, rujin geesinimada ay kala kulmaan diidmo oo aad u dhaqaaqo.
Balse mar hadii aad ka samayso dhaqaaqo in, aad had iyo jeer raadinayaa calaamadaha yar in aad u sheegtid in qofka aad la hadlaysid waa ka yar yahay sida caadiga ah. Waxaa jira dhamaan noocyada kala duwan ee adkeyneysa in ay kaa caawiyaan in aad in: Jidka qof labiska, sida ay u kala hadal iyo luqadda jidhka si ay u magac ahaan laakiin wax yar oo aad isku aragto oo dhan oo iyaga ka mid oo aan ogeyn in aad raadineyso weeyna iyaga.
Hat isku eekeysiiya A iyo drawl Texas a tusaale ahaan, dhakhso leh kuugu sheego meesha uu qof ka iyo halka ay ka taagan ee qaybi dhaqan dalka ee. Timaha bleached iyo weedhaha in la joojiyo la 'dude’ wax badan ayaa kuu sheegi isku mid. Twitches dhimirka, barqiyey gacmaha iyo hanti la xoqo oo dhammu odhan wax ku saabsan qofka aad la qiimaynayo oo kaa caawinaya in aad go'aan ka gaarto in waa in aad taariikh ama u cudurdaartaan.
Kulanka fool-ka-fool ah, aad heshay ton ah calaamadaha kala duwan in aad u sheegto xaddi weyn oo ku saabsan qofka aad ku fekereyso in loogu sheekeeyo.
Online, aad wax ay ku tagaan laakiin waxa qofka oo joojisey in ay profile helay iyo qoray wargayska in ay email.
“Si ka duwan xiriirka nolosha dhabta ah meesha aad wax fikrad qaar ka mid ah waxa a drives qof, waxa ay dhab ahaantii u eg, sida ay ku nool yihiin, iwm, online aad leedahay mid ka mid ahaa in,” ayaa sheegay in Lisa Hupman, cyberdater ruug-caddaa ah oo dhigay ilaa WildXangel.com, website in ka digtay daters kale oo ku saabsan khatarta ku jirta shukaansiga online. “Waxaad siiyo kalsoonida badan waa dhab sababtoo ah sababtoo ah aad qabto Doorasho ma.”
Iyo sababta aad leedahay ma doorasho-ama ka badan si sax ah, doorashada-saabsan yar heerka kalsoonida ku siin waa in qalab ugu waaweyn ee aad ka ilaaliya online waa wax la mid ah ka ilaaliya nutcase qaarkood oo roams Web ah: magaciisa.
Ma jiro hab laba qof oo ay isdhaafsadaan emails online in la ogaado haybta dhabta ah ee dadka ay qoraal si. Email The aad hesho Dullaysto mailkooda ah oo ku yaalla goobta.
Magaca aad doorato waa mid aad loo abuuro oo marag ma aha aqoonsigaaga dhabta ah.
Ilaa iyo inta aadan ha dhabta ah, Magaca buuxa xagooda ka hor aad ilaa xaddi gaar ah oo kalsoonida dhisay, aad bilowdo xiriir online u badbaadiyo xaqiiqada ah in qofka kuu soo qoro si uu leeyahay wax fikrad ah kama qofka aad tahay, meesha aad ku nooshahay ama sida ay u heli karo aad ee ka baxsan goobta.
Marka aad taariikhda ku online, aqoonsiga shukaansigu eegaya samaynaya jirto kaliya ee internetka. Waxaa la kala ooday dhamaystiran u dhexeeya aad is online oo dhab ah aad iyo ooday in waa wanaagsan oo kaa difaaca wacko kasta oo laga yaabaa in aad nasiib ku filan oo ay kula kulantid internetka.
Haddii aad qabto nasiib xun oo ah in la kulmo bool ah goobta shukaansi ah, ilaa iyo inta aad aqoonsigaaga si qarsoodi ah lagu hayaa, mana jirto sabab ay in ay aad dhibaato karaa nolosha dhabta ah.
Dabcan, in ayaga u shaqeeya aad. Sababtoo ah cidna ma hab si aad u hubiso aqoonsiga qof aad internetka kula kulantay, aad heshay wax fikrad ah kama haddii dhakhtarku oo idiin soo diray email ka Harvard heshay shahaadada degree isaga ama iyada, sida ay ku andacoonayaan, ama waxay ka dalban website a ee Romania. Waxaad wax fikrad ah kama helay hadii ay si dhab ah u shaqeeya Corps Peace ee labadii sano ee la soo dhaafay ama qaatay in mailbags tolidda waqti in celinta gobolka ah. Markaasay aad u heysanaa wax fikrad ah kama haddii qofka isu sharaxay sida dareen aad ka tegi doono oo keliya marka aad u sheegto in aadan xiisaynayso ama hartay ay banaanka albaabka hore ee sugaya in aad shaqada ka soo bixin.
Way fiicnaan lahayd haddii ay jiraan kuwo liis in aad tegi karin iyada oo marka aad la kulanto qof online. Haddii ay ku xusan 'mindiyo’ in ka badan saddex jeer email ugu horeysay, aad sax yaabaa sanduuq. Haddii ay sheegay in ay u adeegi jireen weedho badan ee jarriimooyin rabshado wata, in aad keeni karto in ay sax sanduuqa kale. Haddii ay ka hadlayn ay saaxiibtinimo la Unabomber in iyaga dibadda ku dhufan lahaa.
Laakiin ma ahan in si fudud.
Habka ugu fiican ee ku samirsii naftaada ammaan online waa in ay raacaan saddex sharciyo fudud: sii qariyo inta suurto galka; xusuusnow in haddii wax khalad ah uu dareensan yahay, waxa laga yaabaa inay; Oo waxaa iyaga la gooyaa deg deg ah oo si buuxda sida ugu dhaqsaha badan aad wax fishy urin.
Waa Jacaylka Dogs : Xadhig New On Life
Maxaad Waxaad Taariikhda waxaa habboon in Girl ah eyga ah
Waxa aad xiranayso On Date A First By Aayad Burji
5 Khaladaadka Ragga Samee Taas burbur karaa xiriir
© Copyright 2021 Taariikhda My Butros. La dhigtay by 8celerate Studio